एसपीपी पत्र म प्रधानमन्त्री हुनु भन्दा अगाडिको हुनसक्छ, टिपेक्स लगाएर सार्वजनिक गरेः ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीप) मा सहभागी हुने तत्कालीन प्रधानसेनापतिले लेखेको पत्रमा मिति संशोधन गरिएको दाबी गरेका छन् । मदन भण्डारीको ७१ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उनले आफू प्रधानमन्त्री नहुँदै नेपाली सेन...
काठमाडौं । वामदेव गौतम नेतृत्वमा नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान पार्टीको घोषणा गरिएको छ। मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पार्टी घोषणा गरिएको छ। बामदेव गौतम संयोजक रहने गरी घोषणा भएको पार्टीमा सात जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । पार्टी घोषणा कार्यक्रममा संयोजक गौतमले पार्टी बहुपदीय...
बामदेवले घोषणा गरे नयाँ पार्टी, पार्टीमा ८ जनाको सचिवालय रहने
काठमाडौं । वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीको सचिवालयमा ८ जना रहने भएको छ । मंगलबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गौतमले नयाँ पार्टीसहित सचिवालय गठनबारेको जानकारी दिएका हुन् । सचिवालयमा गौतमसहित डीबी कार्की, ओम शर्मा चालिसे डिल्लीराज भट्टराई, दुर्गा भण्डारी, निमकान्...
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि सडकमा खानेकुरा बेच्न निषेध गरेको छ । हैजा नियन्त्रणका लागि भन्दै महानगरपालिकाले उक्त कदम चालेको जनाएको छ । पछिल्ल...
भोली धान दिवसः २७ अर्बको चामल र १५ अर्बको धान आयात
काठमाडौं । असार १५ गते हरेक वर्ष आउँछ र जान्छ । सरकारले विसं २०६१ देखि हरेक वर्ष धान दिवस मनाउँदै आए...
बाढीले मोरङमा एक जनालाई बगायो, ११५ सय घर परिवार विस्थापित
काठमाडौं उपत्यकामा दुई दिन फोहर नउठ्ने
समाचार संक्षेप अरु धेरै
किसानको दुःख : वर्षाले राहत, मल अभावले निराश
फुटतर्फ जसपा, बाबुराममाथि कारवाही गर्ने उपेन्द्र पक्षको निर्णय
जसपामा लफडा : उपेन्द्र पक्षले थाल्यो मन्त्री फेर्ने गृहकार्य
एसपिपी ओलीले ल्याएको हो, यसको जिम्मा उनैले लिनुपर्छ : प्रचण्ड
काठमाडौँ उपत्यकामा १२ जना हैजाका बिरामी भेटिए
नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनियताको शपथ लिए
माधव नेपाललाई योगेशको जवाफ : तपाईं पदमा रहिरहनुहोस्, मलाई पछुतो छैन
डबली विशेष अरु धेरै
शोधनान्तर घाटाको प्रणेता केपी ओली र युवराज खतिवडा हुन्ः प्रचण्ड
देश र जनताको हितका लागि बजेट ल्याउँदा किन विरोध :अर्थमन्त्री शर्मा
बिचार/ब्लग अरु धेरै
जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'
प्रचण्डको विश्लेषण : एमालेको गठबन्धन सामन्त, दलाल, राजतन्त्रवादी र परिवर्तनविरोधी
'नयाँ पुस्ताले जातीय विभेदको पीडा भोग्न नपरोस्’
राजविराज । सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा पर्ने सप्तकोसी नदीमा पानीको बहाव ह्वात्तै बढेको छ । गए रातिदेखि पूर्वी पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा भारी वर्षाका कारण सप्तकोसीमा पानीको बहाव बढेको हो । कोसी ब्यारेजका अनुसार आज सप्तक...
गएरातिदेखि अवरुद्ध डुम्रे–बेँसीशहर सडक खुल्यो
महेन्द्रनगर । गए रातिदेखि आएको वर्षाका कारण कञ्चनपुरका धान खेती गरिरहेका किसानलाई राहत भएको छ । लामो समय पानी नपर्दा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका किसान वर्षा हुँदा राहत भएको बताउँछन् । वर्षा नहुँदा जमिनको ‘पानीक...
सर्लाहीमा दाइको हत्या आरोपमा भाइ र भाइका साथी पक्राउ
पानी पर्न थालेपछि किसान खुसी, मलको अभाव उस्तै
काठमाडौँ । एक पछि अर्को रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भरतपुर–बर्दघाट २२० किलोभोल्ट (केभी) प्रसारण लाइनको आंशिक खण्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ । चितवनको भरतपुरबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को ब...
गलेश्वर । जीवनको उर्वर समय मुग्लानमा पसिना बगाउँदा पनि राम्रो कमाइ गर्न नसकेपछि स्वदेशमा फर्किएर माटोसँग खेल्दै तरकारी खेतीमा लागेका हरिलाल घिमिरेको जीवनमा बल्ल हरियाली छाउन थालेको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ बञ्च...
भलिबलप्रेमी राजु विदेसिँदा किन चिन्तित छन् ?
रुकुम(पूर्व) मा वर्सेनि धान खेती घट्दै
रुकुम(पूर्व) । रुकुम(पूर्व) मा धान खेती घट्दै गएको छ । पहिलेको तुलनामा पछिल्ला केही वर्षमा यस जिल्लामा धानखेती घटेको छ । एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय रुकुम(पूर्व) ले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भन...
जाजरकोट । हुम्ला, डोल्पामा मौसममा आएको खराबीका कारण हप्तादिनदेखि हवाई सेवा बन्द भएको हो । दैनिक यात्रुहरू विमानस्थल गएर फर्कन बाध्य भएको डोल्पा पत्रकार महासङ्घका सचिव लेखबहादुर बुढाले बताए । सडक सञ्जलासँग नजोडिएको...
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमाथि छलफल
कैलाली । कैलालीमा चट्याङमा परी आज एक महिलाको मृत्यु भएको छ । कैलारी गाउँपालिका–१ की ५६ वर्षीया सुगपंखीदेवी चौधरीको चट्याङबाट मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीले जानकारी दिए। घर ...
बाँकेमा लागुऔषध मुद्दा बढ्दै
राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउँछौँ : अध्यक्ष थापा
बहस डबली अरु धेरै
सत्तामा सकस : मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन कि अर्ली इलेक्सन ?
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तीन महिना अर्थात मधुमास समय पुरा गर्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । संविधानको ...
अहिलेकै सत्ता गठबन्धन चुनवासम्म जान्छ, थप मजबुद बनाएर लानुको विकल्प छैन : गुरुङ
देउवाले आत्मसमर्पण वा अर्ली इलेक्सनमध्ये एक रोजे एमालेले साथ दिन्छ : पण्डित
जनताको काम हुँदै नभएको होइन, विषयगत काममा केही समस्या मात्रै हो-भुषाल
संवाद डबली अरु धेरै
शिक्षा र स्वास्थ्य मेरो पहिलो प्राथमिकता हो - नवनिर्वाचित प्रमुख साह (अन्तर्वार्ता)
दाङका पालिकामा कांग्रेस र वडामा एमाले बढी
‘महिला दोस्रो मात्रै होइन पहिलो जिम्मेवारी लिन सक्षम छन्’ (अन्तर्वार्ता)
अर्थ डबली अरु धेरै
विदेशी ग्यास छाडौँ स्वदेशी विद्युत् जोडौँ’ अभियानलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको तयारी
आदर्श लघुवित्तको १६ लाख ७४ हजार आवेदक मध्ये ६ हजार २६१ आवेदकले पाए १० कित्ता
खेलकुद डबली अरु धेरै
बागलुङ । अब सायदै भलिबल कोर्टमा देखिनेछन्, राजु विक । देशका लागि प्रतियोगिता खेल्न नपाए पनि भलिबलप्रेमीले भने उनलाई पछिसम्म सम्झनेछन् । क्विक स्पाइकर विक उत्कृष्ट खेल्दाखेल्दै भलिबलबाट हात धुन विवश बनेका छन् । गलकोट नगरपालिका–५ हरिचौरका विकका लागि...
सेमिफाइनलबाटै बाहिरियो नेपाल
खेलकुद खबरडबली संवाददाता
विज्ञान प्रविधि अरु धेरै
अनुमतिपत्रबिना इन्टरनेट सेवा सचालन नगर्न आग्रह
९७४ मा आधारित सिमकार्ड तत्काल बिक्री रोक्न निर्देशन
स्याटेलाइट सम्बन्धी अध्ययन गर्न चार कम्पनी छनोट
घरमा अब एसि नचाहिने : बैज्ञानिकहरुले बनाए घर चिसो बनाउने रङ !
मनोरन्जन अरु धेरै
यी ४० जना चलचित्रकर्मीले प्रयोग गर्न पाउने भए ‘भिआइपी कक्ष’, को-को परे ?
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेका पहलमा नेपालका ४० जना कलाकारले विमानस्थलको भिआइपी९भिआइपी० कक्ष प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । उहाँहरूले विमानस्थलमा भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । चलचित्र विकास बोर्डले...
फिल्म ‘चिसो मान्छे’ को अग्रिम बुकिङ खुल्ला
माग्ने बुढाको कमेडी शो ‘कमेडी हब’ सुरु
मनोरन्जन खबरडबली संवाददाता
अभद्र व्यवहारको विषयमा नायिका मिरुना र फुर्पाबीच यस्तो सहमति, दुबैले मागे माफी
अभिनेत्री मिरूना मगरमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका युवक धरौटीमा रिहा
आन्दोलनमा योगदान दिनेलाई ‘स्रष्टा चैत्र ३०’ सम्मान प्रदान
खोटाङका स्रष्टा श्रीराम राईको ‘पोलेको मकै’ बजारमा
प्रवास डबली अरु धेरै
एनआरएनएको अध्यक्षमा ३ जना
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० मा तीन जना अध्यक्ष बन्ने निश्चित भएको छ । एनआएरनएको दशौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष कुमार पन्तले राखेको प्रस्ताव हलबाट पारित भएसँगै तीनजना अध्यक्ष बन्ने निश्चित बनेक...
दक्षिण कोरियाले हटायो क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बाध्यता: नेपाली श्रमिकलाई सहज
भारतमा थप चार हजार ५७५ कोरोना संक्रमित भेटिए
अन्तराष्ट्रिय अरु धेरै
अमेरिकाको टेक्सासमा लरीभित्र ४२ आप्रवासीको शव भेटियो
युक्रेन द्वन्द्वपछि पुटिन पहिलो पटक ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानको भ्रमणमा जाने
अनौठौ संसार अरु धेरै
सिन्धुपाल्चोकमा लाठो र ढुंगा प्रहार गरि महिलाको हत्या
श्रीमानलाई उत्तेजित पार्न भित्री वस्त्र सुकाएको आरोपमा श्रीमतिले दिइन् छिमेकिबिरुद्द उजुरी
यी पुरुषले गरे राइस कुकरसँग बिहे, खानेकुरा बनाउने नजान्ने भएकोले डिभोर्स
डबली TV अरु धेरै
यी पाँच संगठनद्वारा केपी सरकारका किसान विरोधी निर्णयहरु उल्ट्याउन सरकारसँग माग (विज्ञप्ति सहित)
१३ वर्षपछि ‘माया बैगुनी’ बोलको गीतसँगै गायनमा फर्किन् उर्मिला
प्रकाश सपुतको नयाँ गित युुवको ट्रेन्डिङ्मा –तपाईले सुन्नुभयो ? भिडियोसहित !
स्वास्थ्य/शिक्षा अरु धेरै
के हो मस्तिष्काघात ? के समयमै उपचार पाए पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन सकिन्छ ?
काठमाडौँ । मस्तिष्काघात उपचार सेवामा नेपाली नसारोग चिकित्सकले हासिल गरेको उपलब्धिलाई भारतीय नसारोग ...
बालेनलाई बधाई दिंदै सिर्जनाले भनिन् : मतले जित्न सकिनँ, नगरवासीको मन जितें
काठमाडौं महानगरका १९ वडामा कांग्रेसले जित्यो, एमाले १२ मा खुम्चिंयो (सूचीसहित)
विजय सुवेदीलाई १७ मतले पछि पार्दै पुनः रेनु दाहाल अघि
खबरडबली संवाददाता राजनीति
लोकसेवा/रोजगारी अरु धेरै
जिवन शैली अरु धेरै
नयाँ वर्ष २०७९ सालमा तपाईको भाग्य कस्तो हुनेछ ? हेर्नुहोस् वार्षिक राशिफल
ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी
सम्भोग र उत्तेजनाप्रति मानिसका १५ भ्रम र यथार्थ
२० वर्षको उमेरमा के चाहन्छिन् महिला ?
हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल www.welcometournepal.com
हुम्लाको लिमी उपत्यका : यसकारण छ ऐतिहासिक !
बादलको घुम्टोभित्र धौलागिरी हिमाल (तस्बिर) खबरडबली संवाददाता
विश्वकीर्तिमानी कामीरिताको आरोही टोली आधार शिविरमा खबरडबली संवाददाता